Chinese search engine Baidu malite Blockchain-ka-a-ọrụ n'elu ikpo okwu
Chinese web search ibu Baidu ka ulo oru ya blockchain-ka-a-ọrụ (BaaS) n'elu ikpo okwu.
Dabere na technology mepụtara Baidu, emeghe n'elu ikpo okwu na-akọwa na-enye ndị kasị “dị mfe ojiji” blockchain ọrụ.
Dị ka ike raara nye website, “Baidu Trust” na-enye ohere na-eduzi na n'ịkpọ nke azụmahịa, na ike na-etinyere iche iche eji ikpe, tinyere digital ego, digital ịgba ụgwọ, akụ n'aka management, insurance management ego auditing, na ndị ọzọ.
US ọchịchị forms arụ ọrụ otu lekwasịrị anya cryptocurrencies
US Treasury Secretary Steven Mnuchin kwuru na Friday na Financial Kwụsie ọrụ ilekọta ọgbakọ Council, a ọchịchị ahụ na atụlekwa ego usoro ihe ize ndụ, kpụrụ a na-arụ ọrụ otu lekwasịrị anya cryptocurrencies.
Mnuchin kwuru na usoro n'oge ihe n'ile na The Economic Club na Washington, D.C. mgbe a jụrụ banyere isiokwu nke bitcoin.
“Anyị na-nnọọ lekwasịrị anya cryptocurrencies,” Mnuchin kọwara, na-atụ aka mkparịta ụka ndị ọzọ regulators n'ime U.S. ọchịchị na mgbe e mesịrị na-ekwu: “Anyị chọrọ iji jide n'aka na ihe ọjọọ ndị mmadụ nwere ike iji ndị a ego na-eme ihe ọjọọ.”
Mnuchin kwukwara na-ese bụ onye na U.S. ọchịchị ga na-ekere òkè na G-20 mba otu nakwa.
Mnuchin jụrụ ma ọ bụrụ na Federal Reserve yiri ịzụlite ya digital version of fiat ego.
“Nri na m na-echeghị na e nwere ihe a mkpa na n'ọnọdụ a,” Mnuchin kwuru.
Russia si Sberbank ọkwa blockchain lab
Sberbank, otu n'ime ndị kasị ibu mmiri na Russia, ka a mara ọkwa a blockchain laabu ịzụlite na ule blockchain ngwọta ndị dabeere na.
The ọhụrụ lab Aims n'ịwa ngwaahịa prototypes, ịrụ pilot ule na idokwa blockchain dabeere azụmahịa ngwọta maka Sberbank Group, a pịa ntọhapụ kwuru.
Dị ka Igor Bulantsev, Sberbank si agadi osote onyeisi oche, blockchain nwere ike inyere “reshaping” ego azụmahịa ahịa, nakwa dị ka ụlọ akụ ahụ na-eme na ọrụ.
Blockchain electronic mbinye aka ụgwọ obụp mi ke Tennessee
A iwu na Tennessee ka gbara akwụkwọ ọhụrụ iwu na-amata blockchain signatures dị ka iwu electronic ndia, marking ọhụrụ omebe iwu mgbalị ime otú-adịbeghị anya izu.
The ụgwọ, osụk aka Tennessee House of Representatives ala iwu Jason Powell na Jan. 10, kwupụtaghachiri yiri iberibe iwu gbara akwụkwọ na Florida na Nebraska.
Ma dị ka na mgbalị Florida na Nebraska, ọ na-anọgide na-hụrụ otú ndị ọzọ na omeiwu ga-eme ka ọtùtù-akpali site arụmụka usoro.
Online akụ Swissquote ụba ya si uru ele ihe anya n'ihi na Bitcoin trading
Online akụ Swissquote adi ya uru echiche maka 2017, ebe uru site ike trading na cryptocurrencies. The ụlọ ọrụ a kpuo na mmasị maka bitcoin trading.
Gland dabeere Swissquote atụ anya enwetakwa ka totaled 186 nde Swiss franc na 2018, 8 nde karịa ya Eburu amuma ya na-adịbeghị anya amụma. The akụ kwuru na ọ ga-biputere a pretax uru nke banyere 45 nde franc, dị ka a na nkwupụta tọhapụrụ taa.
The nkọ ịrị elu enwetakwa na uru ibu bụ n'ihi nke abụọ ihe, Swissquote kwuru.
Ahịa ahịa budata ọzọ na ala na mba ọzọ mgbanwe, mgbe ụlọ ọrụ nwekwara uru ná iwebata cryptocurrency trading.
Swissquote ahụ bụ nke mbụ European online akụ ẹkedori àjà dị otú na July, 2017.
Japan si DMM Group malite Bitcoin exchange
DMM Group, a Japan dabeere eCommerce na Internet nketa ụlọ ọrụ na-launching ọhụrụ mgbanwe akpọ DMM Bitcoin.
The ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ na àjà 24/7 ahịa nkwado, na bụ ugbu a na Kacha ọhụrụ usoro Bitcoin mgbanwe Japan.
The ike na-eze aha dị ka a 'virtual ego ahia’ na Japanese Finance Bureau
Smart contracts ugbu a ghọtara n'okpuru Tennessee iwu
The gọvanọ Tenn ...
Previous Post:Bitcoin Hardforks gịnị ka ọ bụ?
Next Post:Blockchain News 13 January 2018